Nhau - Kudiridza kwedrip kuri nani pane vanosasa mvura
Kudiridza kwekusasa mvura, ndiko kuti, spray kudiridza, inzira yekudiridza yepamberi iyo inoshandisa seti yemidziyo yakakosha kupuruzira mvura pasi pekumanikidzwa kuenda mumhepo, ichiumba tumadonhwe tudiki, semvura, yakadururwa zvakaenzana pavhu rakarimwa, uye nzira yepamusoro yekudiridza govera zvirimwa nemvura.
Nekudaro, yemadiridziro ekudiridza inewo zvimwe zvaisingakwanise: Inokanganiswa zvakanyanya nemhepo, uye madonhwe emvura akasaswa anofanira kumwayirwa kune imwe hurefu asati adonha. Iyo trajectory yayo inokanganiswa zvakanyanya nemhepo, iyo inoshandura kugoverwa kwemvura mundege uye inokanganisa kupfira zvakafanana; Kana kumhanya kwemhepo kukwirira uye mwando wemhepo wakadzika, kurasikirwa kwekudonha uye kubuda kwemhepo kunenge kuri kukuru, dzimwe nguva kutosvika gumi % -30% yemvura yekudiridza.
Kudonhedza kudiridza inoshanda zvakanyanya pakupa rimwe kana mana emarita emvura paawa yakananga kuvhu. Kubatsira kwekudonha kudiridza pamusoro vanosasa ndeyekuti pane kushomeka kwemvura kurasikirwa nekuda kwemvura kana runoff.
Kudonhedza kudiridza ndiyo inonyanya kudiridza uye yakakodzera nzira yekudiridza. Panzvimbo pekunyorovesa munda wese wepasi, mvura inoiswa chete kune yemidzi midzi nzvimbo. Chinangwa chekutanga che kudonha kudiridza kuisa mvura panguva iyo zvirimwa pazvinenge zvichinyanya kuda uye nemitengo inodiwa pakukura zvakanaka kwemiti.
Donhwe Irrigation inogona kushandiswa zvakanyanya mumhando dzakasiyana dzemunda, munda wemichero, greenhouse, munda wepurazi, gadheni nezvimwe.
Enzanisa nedzimwe mhando kudiridza, kune zvakawanda zvakanaka zvekushandisa Drip Irrigation:
1.Kuchengetedza mvura, kuchengetedza-simba, kuchengetedza-fetiraiza, kuchengetedza vashandi, kusanganisa kuri nyore, inzvimbo yakanaka inotsigira michero nemiriwo yemhando yepamusoro isina kusvibiswa;
2. Chengetedza tembiricha yepasi uye hunyoro kuti udzikise kukuvara kwezvipembenene;
3. Chengetedza chimiro chevhu, kudzivirira kuumbika kwevhu, uye zvakare kuve nemhedzisiro yekurasa munyu;
4. Mbeu inokura zvine simba, saizi yemichero yakaenzana, uye muchero unoenda pamusika pamberi. Kuburitsa kwakawedzera kupfuura 35%, kwakawedzera mari yevarimi.